Myanmar Defence Weapons: မြန်မာ့ တပ်မတော်ထုတ် စက်လက်နက်များ
Posted by MM at 1:06 PM
unknown June 25, 2011 at 2:24 PM
အပေါ်ဆုံးပုံက "MA -3ချေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်"ပါခင်ဗျာ..၊ ဒုတိယပုံကတော့ "MA -2စက်ကလေး"ပါ..၊ တတိယပုံကတော့ ကျွန်တော်တို့အခေါ် "ငါးကြင်းမြီး"လို့ ခေါ်တယ်ဗျ... နောက်ပြီး နာမည်အခေါ်ကိုလဲ "အမ်ဂျီ သရီး စက်လတ်"လို့ပဲ နှုတ်ကျိုးနေတယ်.. အမှန်ကတော့ ဒီမှာရေးထားသလို ဘီအေ-၁၅ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်လဲ မေ့ချင်သလိုလိုဖြစ်နေပြီဗျ..၊ စတုတ္ထပုံနဲ့ပဉ္စမပုံကတော့ "MA - 4.. ၄ဝ မမ ဗုံးပစ်လောင်ချာတွဲလျက် ချေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်"ပါ။ နောက်ထပ် "MA - 1 ချေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်"ဆိုတာ ရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာ...။ MA 1,2,3,4 အားလုံး ၅.၅၆ မမ ကျည်တွေကို သုံးပါတယ်။ MA - 1 က ပုခုံးဒင်ပါ(အသေ)ဖြစ်ပြီး အပေါ်ဆုံးပုံမှာပါတဲ့ MA -3ကတော့ ပုခုံးဒင်ကို ခေါက်လို့ရတဲ့ အရှင် ဖြစ်ပါတယ်။
mg June 25, 2011 at 2:24 PM
ပထမဆုံးပုံက ဒင်ခေါက်လို့ရတယ်။သူက MA-3။ ကိုင်ဆောင်တဲ့စစ်သည်တွေက အရာရှိ အရာခံ ဒုအရာခံဗိုလ် တပ်ကြပ်ကြီးတွေ ကိုင်ဆောင်တယ်။
ဒုတိယပုံ စက်ကလေးက MA-2။ကိုင်ဆောင်တာက တပ်ကြပ် သို့မဟုတ် senior ရဲဘော် တစ်ယောက်ယောက် အဆင်ပြေသလို ကိုင်ဆောင်တယ်။
လောင်ချာတွဲနဲ့ပုံက MA-4။သူလည်းပဲ ဒုတိယပုံ MA-2 ကိုင်ဆောင်သူလိုပဲ အဆင်ပြေတဲ့သူကိုင်တယ်။
တပ်သားရဲဘော်လေးတွေကတော့ MA-1 သေနတ်ကိုင်တယ်။MA-1 ပုံစံက MA-2 လိုပါပဲ ဒေါက်ဖြုတ်လိုက်ရင် MA-1 ပုံစံပါပဲ။
(ဒါက ပုံမှန်အတိုင်းကိုင်ဆောင်ရမယ့်ပုံစံကိုပါ။တပ်တွေမှာတော့ အဆင်ပြေသလို ကိုင်ဆောင်ကြတာပါပဲ။တစ်ခါတစ်လေ အရာရှိငယ်တွေဆိုရင် လောင်ချာတွနဲ့ MA-4 ကိုကိုင်ရတာ နှစ်သက်လို့ ကိုင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်)
MM June 27, 2011 at 10:01 AM
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ.. MA-4 ကတော့ ကျွှန်တော် သဘောကျတယ်ဗျ အတော်ပစ်လို့ကောင်းမယ် အာပီဂျီတွေကရော ဘယ်လိုခေါ် သလဲဗျ အာပီဂျီ-၂ အာပီဂျီ-၇ တွေကိုထုတ်တယ်လို့ကြားရလို့ပါ။
Comrade June 27, 2011 at 12:26 PM
အာပီဂျီတော့ သုံးမျိုးလောက် တွေ့ဖူးတယ်ဗျ။ ဘီအေ-၁၀၃၊ အဲဒါက အရင်ခေတ်(BA Series ခေတ်က) သုံးတာပေါ့။ နောက် ကျောင်းတုန်းက သင်ခဲ့ဖူးတာက Type-69 (85mm warhead)(အခုလက်ရှိ သုံးနေတုန်းလားတော့ မသိဘူး)။ ရှေ့တန်းမှာ တကယ်သုံးနေတာ တွေ့ရတာကတော့ MA-10 ၊ ၄၀ မမ ပြောင်းနဲ့ warhead ကတော့ နှစ်မျိုးလောက် သုံးတယ်။ MA-10 က ကိုMM ပြောတဲ့ အာပီဂျီ-၇ ပါပဲ၊ ကပစ ထုတ်ပေါ့။
waymin007.blogsport.com August 4, 2011 at 10:21 PM
အမ်အေ စီးရီးထဲက အမ်အေ ၁၃ ပုံလေး ရရင်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ....ဒင်ချိုး လိုရပြီး ပြောင်းကိုလဲ အရှင်တပ်ထားတဲ့အတွက် ဖြုတ်ထားရနိုင်ပါတယ်...ဒင်ချိုးပြီး ပြောင်းဖြုတ်ထားရင် ခါးမှာတောင်အလွယ်တကူ ချိတ်ထားလို.ရနိုင်တဲ့ အမ်အေ ၁၃ သေနတ်ကို ကျနော် ကိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်..ထုတ်တဲ့နှစ်တော့မေ့နေပါပြီဗျာ....ပုံလေးရရင်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်....အများဆုံးထုတ်ပေးထားတဲ့တပ်တွေကတော့ စစ်လက်ရုံးတပ်တွေလို. မှတ်သားခဲ့ဖူးပါတယ်.....လေးစားပါတယ်ဗျာ...
မျိုးမဟော် October 3, 2011 at 9:42 AM
မျိုးမဟော် October 3, 2011 at 9:44 AM
မျိုးမဟော် October 3, 2011 at 9:48 AM
Min Thu Rein November 28, 2011 at 5:30 AM
The picture of MA4is the new version. Previous version has handle and trigger...now..is using Punk Action...
AUNG KO May 25, 2016 at 12:36 AM
ဘာလို့ စနိုတ်ပါ မတပ်ကြတာလဲဗျာ